HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nilaza, ohatra, ny apostoly Paoly hoe: ‘ Te hanao ny marina amin’ny zava-drehetra izahay. ’ (Hebreo 13:18) Ary ianao? Milaza ny marina ve ianao rehefa miresaka amin’ny ray aman-dreninao an’izay toerana alehanao sy ny zavatra ataonao?
“ Nisy ankizilahy tiako be izay, dia nandefasako e-mail foana. Tratran’ny dadanay sy mamanay ilay izy, dia nasainy najanoko. Nilaza aho hoe tsy hanao intsony, nefa mbola notohizako ihany ilay izy nandritra ny herintaona. Isaky ny tratra aho, dia nifona, sady nampanantena fa tsy hanao intsony, nefa mbola nanoratra ihany. Lasa tsy natoky ahy intsony ry zareo, na tamin’inona na tamin’inona! ”
“ Tsy natokitoky ahy mihitsy ry dadanay sy mamanay taloha raha vao resaka ankizilahy. Izao vao fantatro ny antony. Nisy ankizilahy vitsivitsy nahataratara ahy, ary zokiko roa taona ry zareo. Nifampitelefaonina ela be izahay. Ry zareo koa no tena niresahako rehefa tafaraka tany amin’ny fety izahay. Tsy navelan’ny dadanay sy mamanay nampiasa telefaonina aho tao anatin’ny iray volana, sady tsy navelany ho any amin’izay toerana nety hahitako azy ireo. ”